Lacagta ugu fiican ee dhijitaalka ah ee maalgashiga ah ee 2021. Xawaaladaha daba-galka leh ee koraya oo leh xasilooni sare (isbedelka ugu yar).
Ugu sareeya 10 suuqyada ugu wanaagsan ee dhoofinta macdanta iyo iibsiga, si joogta ah u koraya qiimaha suuqa sarrifka saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Xawaaladaha lacagaha sii kordhaya ee sii kordhaya
Koboca boqolleyda ee quarterka
Dogecoin (DOGE) 1 393 %
Enjin Coin (ENJ) 662.03 %
ICON (ICX) 335.32 %
Basic Attention Token (BAT) 213.08 %
aelf (ELF) 118.68 %
Dash (DASH) 109.69 %
Qtum (QTUM) 95.91 %
ZB Token (ZBTOKEN) 53.30 %
WaykiChain (WAYKICHAIN) 52.19 %
GAPS (GAPS) 5.57 %
Sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa fikrad ku saleysan maalgashade kasta.
Nidaamyada 'Aaladaha lacagta' ee adduunka waxaa loo isticmaalaa hab lagu maalgaliyo iyo aalad ahaan lacag bixinta, isweydaarsiga lacagta.
Lacagta ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' sida lacagta, oo ah qalabka lacag bixinta waxaa lagu go'aamiyaa xawaaraha macaamil, komishanka ugu yar ama maqnaanshahooda halkii macaamil ganacsi, tirada milkiilayaasha boorsooyinka crypto, iyo sidoo kale fududeynta sarrifka lacagaha dhabta ah.
Sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'lacagta digital' oo ah hab maalgashi waxaa lagu go'aamiyaa faa iidadiisa, koritaanka joogtada ah ee heerka qiimaha 'lacagta digital' iyo waliba xasilloonida sicirka.
Adeegga loo yaqaan 'cryptoratesxe.com' Lacag wanaagsan oo wanaagsan wuxuu muujinayaa meesha ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' marka loo eego maalgashiga.
Waxaan la soconaa sicirka sarrifka internetka ee dhammaan lacagaha loo yaqaan 'crypto', isbeddelka heerka sarrifka, codka, dhaqdhaqaaqa kobaca iyo cabbirro kale si aan u qiimeyno aaladaha lacagta adduunka ugu fiican.
Jadwalka qaab dhismeedka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ayaa muujinaya 3-da ugu sareysa ee ugu fiican crypto maalgashiga. Isticmaalka shaxda ugu fiican ee aaladaha lacagta waa bilaash, macluumaadka waxaa lagu cusbooneysiiyaa khadka tooska ah.
Shaxanka khariidadaha ugu fiican ee aaladaha lacagta waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto taariikh gaaban oo ka mid ah xaddiga laga soo xulay khariidadaheena ugu sarreeya. Garaafka ugu fiican ee crypto waxaad ku qiimeyn kartaa xasilloonida koritaanka lacagta oo go'aan ka gaartaa maal-gelinta sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'lacagta digital'.
Korodhka lacagaha 'aaladaha lacagta' waa 'cryptos', heerka uu ku korayay waqti ka dib.
Kobcinta Lacagta digital waa fikrad qaraabo ah. Sicirka suuqa ee wixii lacagta digital ah ee lagu ganacsado sarrifka 'crypto-sarrifka' ayaa had iyo jeer isbeddelaya, kordhaya oo yaraanaya. Sidaa daraadeed, waa suurtagal in laga hadlo kororka ama yaraynta heerka sarrifka lacagta waqti go'an.
Waxaa jira qiyaaso tiro oo kala duwan oo ku saabsan kobaca lacagta digital. Adeeggeenna Lacag wanaagsan oo wanaagsan, waxaan adeegsanaa mid ka mid ah qiyaasaha kobaca lacagta digital ugu caansan 3dii bilood ee la soo dhaafay.
Waa kororka ugu badan ee qaddarka crypto muddo 3 bilood ah oo aan ku qiimeyno sida ugu wanaagsan ee loo kordhiyo heerka loo yaqaan 'lacagta digital'.
Aaladaha lacagta oo leh codka ugu yar.
Aaladaha lacagta oo leh codka ugu yar - kuwa aaladaha lacagta kuwaas oo sicirka sarrifkoodu leeyahay isbeddelada ugu yar. Haddii kale, aaladaha lacagta oo leh awood yar ayaa lagu magacaabi karaa aaladaha lacagta oo leh heerka sarrifka ugu xasilloon.
Awood yarida codka ayaa ku habboon maalgashi dheer. Isbedbedelka cufan ee isdhaafsiga lacagta digital ee dhammaan waxay dhiirigelisaa xasilloonida iyo saadaalinteeda.
Maalgashiga aaladaha lacagta oo leh codka kalsoonida yar wuxuu xaq u leeyahay maalgashi lacageed oo waqti dheer ah.
Lacag wanaagsan oo wanaagsan 2021
Lacagta ugu wanaagsan ee 2021 waa adeeg bilaash ah oo khadka tooska ah ee websaydhkeena kaasoo muujinaya TOP aaladaha lacagta oo leh kororka sicirka sarrifka ugu fiican iyo codka ugu yar ee 2021.
Waxa ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' 2021 waxaa lagu qiyaasey iyadoo lagu saleynayo falanqaynta seddexdii bilood ee la soo dhaafay. Waxaan isbarbar dhigaa koritaanka heerka sarrifka lacagaha ee 'lacagta digital' iyo xasilloonidiisa ama codkiisa oo aan dhisno qiimeynta iyo TOP ee lacagaha ugu fiican ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' 2021.
Qiimaynta aaladaha lacagta ugu fiican ee 2021 waa laqarjumaa maalin kasta. U adeegso adeegyadeena si aad u doorato lacagta digital ugu fiican ee maalgashiga muddada-dheer.